ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ စပရိုက် လုပ်ပေး ဖို့ သွားခဲ့ပေမယ့် ​ကြေကွဲဆို့နင့်​ခဲ့ရတဲ့ ​ကောင်​​လေး - Grand Parents-Day
Home / News / ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ စပရိုက် လုပ်ပေး ဖို့ သွားခဲ့ပေမယ့် ​ကြေကွဲဆို့နင့်​ခဲ့ရတဲ့ ​ကောင်​​လေး
ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ စပရိုက် လုပ်ပေး ဖို့ သွားခဲ့ပေမယ့် ​ကြေကွဲဆို့နင့်​ခဲ့ရတဲ့ ​ကောင်​​လေး
by Admins on November 08, 2019 in News
လူနှစ်ယောက်ချစ်ကြတဲ့အခါချစ်နေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူးအချစ်တစ်ခုတည်မြဲအောင် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေသစ္စာရှိမှုတွေ တည်ဆောက်ရတာပါါမှလည်း ရေရှည်ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကိုယ်ကသာ သူ့ကိုအရမ်းချစ်ပြီး သူ့အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေမဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလေးတွေကို Surprise လုပ်ပြီး ဖန်တီးပေးပေမဲ့
ချစ်သူကောင်မလေးကတော့ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာမို့ စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းလေးကို လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့
Twitter မှာ လူပြောများနေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကောင်လေးဘက်ကနေ ဝိုင်းဝန်းအားပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေကြပြီး သစ္စာမရှိတဲ့ ကောင်မလေးကို ဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ သူမ မသိအောင် ပန်းစည်းနဲ့ Surprise လုပ်ဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ကောင်လေးဟာ အံ့သြဝမ်းနည်းဆွံ့အသွားခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာ တခြားယောက်ကျားတစ်ယောက်နဲ့ ပွေ့ဖက်ချီပိုးပြီး ဖောက်ပြန်နေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရတော့ ကောင်လေးဟာ မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပြီး အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ တခြားယောက်ကျားတစ်ယောက်တို့ ချီပိုးနေကြတာကို
နောက်ခံထားပြီး Selfie ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ခုလိုစာလေးရေးခဲ့ပါတယ“ဒီနေ့က ကျွန်တော့်ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲတာကြောင့် သူ့ကို Surprise လုပ်ဖို့ တွေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မထင်မှတ်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာ.” ဆိုပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာ ရေးသားခဲ့တာပါ
သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ စာကို မြင်ရသူတွေကတော့ ကောင်လေးကို စာနာသနားနေကြပြီး ကောင်မလေးကို ထားခဲ့ဖို့ တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်
တချို့ကတော့ ဒါဟာ အထင်မှားတာဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေတာပါလို့လည်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးတင်ထားတဲ့ ပုံထဲမှာတော့ တခြားယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချီပိုးတာကို ခံနေတဲ့ ကောင်မလေးဟာ အဲဒီယောက်ကျားလေးကိုလည်း ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ ပြန်ခွထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
ကဲ…ပရိသတ်ကြီးတို့ရော…ဒါဟာ အထင်မှားမှုတစ်ခုလား…ဒါမှ မဟုတ် ဖောက်ပြန်နေတာလားဆိုတာ ပုံလေးကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါအုံးနော်….
တချို့ကတော့ ဒါဟာ အထင်မှားတာဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်နေတာပါလို့လည်း ပြောဆိုနေကြပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးတင်ထားတဲ့ ပုံထဲမှာတော့ တခြားယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချီပိုးတာကို ခံနေတဲ့ ကောင်မလေးဟာ အဲဒီယောက်ကျားလေးကိုလည်း ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ ပြန်ခွထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရောဒါဟာ အထင်မှားမှုတစ်ခုလား…ဒါမှ မဟုတ် ဖောက်ပြန်နေတာလားဆိုတာ ပုံလေးကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါအုံးနော